Dhageyso:-Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa si weyn cambaareeyay Wariye shalay lagu xiray Magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:-Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa si weyn cambaareeyay Wariye shalay lagu xiray Magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
written by warsan radio 27/02/2017
Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa si weyn cambaareeyay Wariye shalay lagu xiray Magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
War Qoraal ah oo uu soo saaray xoghayaha ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa lagu sheegay in ururku ay si weyn uga xun yihiin xariga loo geystay Wariye Xuseen Xasan Dhaqane oo ka mid ah Wariyeyaasha ka howgalayay Magaalada Baledweyne.
” Waxaan weydiisanaynaa maamulka gobolka Hiiraan in ay siidaayaan wariyaha si shuruud la’aan ah , waxaan ka codsanaynaa in ay xushmeeyaan warbaahinta” sidaasi waxaa yiri Xoghayaha ururka NOSOJ Maxamed Ibraahim Macalimuu.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la shaqeynaayay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA , waxaana la sheegay in xarigiisa uu Amray Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan.
Warbaahinta Madaxa Banaan ayaa wajahaysa caddaadis xoog badan oo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulada ka jira dalka .
Wakan Xogayaha Ururka saxafiyiinta Qaranka soomaaliyeed Ee Nosoj Mahamed Ibarahim Macalimo oo wareysi siiyey Warsan Radio waxa
wareystey wariye Feysal dhayow Xuseen
Dhageyso:-Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NOSOJ ayaa si weyn cambaareeyay Wariye shalay lagu xiray Magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. was last modified: February 27th, 2017 by warsan radio
Dhageyso:-Kulun Su,aalo lagu weydiineyey Waziiru Dowlaha wazarada madaxtooyda KGs ayaa Manta ka dhacay Magalada Baydhabo
Wadamada Itoobiya, Masar iyo Sudan oo ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadalkooda
RW Kheyre oo faray Wasaarada Maaliyadda bixinta lacagta ku baxeysa ka hortaga Fatahaada Baladweyne